Meelaha Acoustical -ka ugu fiican, guddi derbiga ah 3d, foornada acoustic, soosaarayaasha guddiyada nuugista acoustic iyo alaab -qeybiyeyaasha | Vinco
Guddi acoustic Fabric
Guddi acoustic alwaax ah
Polyester panel acoustic
Guddi dhogor ah
Hoos -u -dhigga Soundproof
Hoos -u -dhigga Dabaqa
Bar -guur guur
Waab aan cod lahayn
Albaabka aan codka lahayn
Fasalada & Dugsiyada
Hoteellada & Makhaayadaha
Waa maxay sababta Vinco
Hawlgalka & Aragtida
Aqoonta dahaarka sanqadha
Dabinka baska ee daaweynta Acoustic
Guddiga loo yaqaan 'Acoustic board, board soundproof', pa isolation sound ...
Laallaadinta guddiyada dhawaaqa, qiimaha gudigga acoustic, dhawaaqa ...
Daruuraha saqafka, guddidii saqafka ee la laalay
Diffuser alwaax ee istuudiyaha
Dahaarka dhogorta alwaax, guduud acoustic dhogorta alwaax, alwaax ...
Vinyl 2lb oo cufan oo culus, xannibaad vinyl ah
Caqabada Acoustics -ka, daahyada codadka, bustaha acoustic -ka ah
Cinwaanka: Aagga Warshadaha, Xarunta BaoYunda, Wadada Xixiang, Magaalada Xixiang, Degmada Baoan, Shenzhen, Shiinaha.
Meelaha Acoustical -ka ah, gudiga darbiga 3d, foornooyinka acoustic, gudiga nuugista acoustic
Dusha Acoustical, guddi derbiga 3d, foornada acoustic, gudiga nuugista acoustic waxaa laga sameeyay 100% polyester, iyada oo cirbadda lagu feerayo. Geedi-socodka wax-soo-saarku gabi ahaanba waa jir ahaan & bay'ada-saaxiibtinimo, ma laha biyo qashin ah, qiiqa, qashinka ,. ma dhajiye, Dabeecadda dabaysha leh ee gudiga acoustic -ka ayaa ka dhigaysa mid u nuugaysa nuugista & kuleylka.
Guddiyadeena dhawaaqa PET ee aan sunta ahayn, aan xasaasiyadda lahayn, aan xanaaqayn oo aan ku jirin kondders formaldehyde oo leh cod-celin sare (NRC: 0.85).
Gudiga acoustic fiber polyester wuxuu ka samaysan yahay 100% fiber, ka dib markii si kulul loogu cadaadiyey qaabka suufka. Oo waxaan u isticmaalnaa saxaafad kulul oo kala duwan si aan u gaarno cufnaanta kala duwan oo aan hubinno hawo-qaadashadeeda, taas oo ka dhigaysa inay noqoto nuugista dhawaaqa iyo alaabada dahaarka leh.
Magaca badeecada Polyester fiber acoustic panel
Maaddooyinka 100% fiber polyester tayo sare leh
Cabbirka 1220*2440*9/12mm (dhumuc kale ayaa la beddeli karaa)
Cufnaanta 160- 229kg/M3
Midab Jaantuska midabka
Saamaynta nuugista codka 0.85
Dab -diid Darajada B1
Deegaanka Darajada E1
Qaabka xagasha Chamfer, toosan
Codsiga Studio, xanaanada, shineemada, istuudiyaha, iwm.
Sawirrada guddida acoustic fiber polyester:
Faa'iidooyinka gudiga acoustic fiber polyester:
1) Rakibaadda fudud
2) Eco, Udgoon, Nabadgelyo oo si sahlan loo nadiifiyo
3) Saameyn qurxoon oo wanaagsan, iyo in ka badan 40 nooc oo midabyo ah
Codsiga gudiga acoustic fiber polyester:
Waxaa si weyn loogu isticmaalay guryaha opera, filimada iyo hoolalka telefishanka, istuudiyaha wax lagu duubo, qolalka baahinta, telefishannada, hoolalka hawsha badan leh, qolalka shirarka, hoolalka riwaayadda, maqasyada, magaalooyinka madadaalada iyo madadaalada, hoteellada, KTV, iwm.
Maraakiibta & xirxirida:
Alaabtu waxay ku xirmi doontaa bacaha
Gaadiidka: Badda ama hawada
1. Xirfad-Waxaan leenahay shaqaale iibiya xirfadeed. Wixii su'aalo ah waxaa lagu jawaabi doonaa 24 saacadood gudahood.
2. Qiimaha-Sababtoo ah waxaan nahay warshad, markaa waxaan bixin karnaa tayo sare iyo alaab qiimo jaban.
3 Adeegga-Si sahlan oo ku habboon gaadiid-qaadidda, waxaan ballan-qaadeynaa taariikhda gaarsiinta waqtigeeda, iyo adeeg-iibin wanaagsan kadib.
4. Kooxda-Waxaan leenahay waaxdeena injineernimada, sida ku cad codsigaaga dawaarkaaga oo laguu sameeyay alaabtaada.
1. Waxaan aad ugu faraxsanahay in macmiilku na siiyo waxoogaa talo bixin ah oo ku saabsan qiimaha iyo badeecadaha.
2. Haddii wax su'aal ah, fadlan noogu soo sheeg marka hore Email ama Telefoon. Wakhti ayaanu wax kaga qaban karnaa
1. Haddii macmiilku leeyahay wax jadwal ah Shiinaha, fadlan noo sheeg. Waxaan jeclaan lahayn inaan kaa caawinno inaad ballansato hoteelka oo aan kaa soo qaadno dekadda hawada, ama saldhigga tareenka.
2. Dhibaatooyin kasta oo dheeri ah, fadlan xor u noqo inaad weydiiso, annaguna waxaan isku dayi doonnaa intii karaankeena ah inaan ku siino!
Waxaan rajeyneynaa weydiintaada naxariista leh
Hore: Dabinka baska ee daaweynta Acoustic
Xiga: Qeybinta laab, derbiga xijaab ee laalaab
S: Intee in le'eg ayaad qaadan doontaa si aad u samayso shaybaarrada?
A.Caadi ahaan waxaan qaadan doonaa 1 ~ 7 maalmood si aan u sambalno.
S: Waa maxay wakhtiga dhalmadaadu?
A. Waqtiga dhalmadu waa 15-25 maalmood gudahood ka dib markaan helno deebaajiga. Daacadnimo, waxay ku xiran tahay tirada dalabka iyo xilliga aad dalabka samayso.
S: Miyaad lacag ka qaadi doontaa saamiga?
Tijaabooyinka A. Heerarka caadiga ah waa lacag la'aan, laakiin muunadaha la diyaariyey waxaa lagu soo oogi doonaa kharash macquul ah xamuulkana waa la qaadaa. Kadib marka la xaqiijiyo amarka, waxaan dib u bixin doonnaa khidmadda cad. Fadlan ku kalsoonow taas.
S: Waa maxay shuruudahaaga lacag bixinta?
J: Lacag bixinta <= 1000USD, 100% hore. Bixinta> = 1000USD, 30% T/T horay, dheelitir ka hor inta aan la rarin.
S: Ma aqbali kartaa OEM?
J: Haa, sida soo -saaraha, waxaan furi karnaa caaryada si aan u soo saarno wax kasta oo ka mid ah guddiyada acoustic marka loo eego saamigaaga ama sawirkaaga.
Haddii aad qabtid su'aalo dheeraad ah, fadlan xor u noqo inaad nala soo xiriirto, mahadsanid!
Qurxinta darbiyada derbiga 3d, dhawaaqa dhawaaqa, ...
Guddi nuugay, guddi 3d acoustic ah, nuugid m ...
Xakamaynta dhawaaqa gudiga austustic, derbiga acoustic ilaa ...
Qalabka daboolida ee Shenzhen Vinco Co., Ltd. wuxuu ku takhasusay qalabka daboolida sanado badan wuxuuna bixiyaa R&D, wax soo saarka, iibinta iyo iibinta adeega alaabada kadib.